Dwayne Johnson – Family Of Films
The Rundown (2003) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Rundown (2003) မြန်မာစာတန်းထိုး The Rundown (2003) ) သည် IMDb 6.7 Rotten Tomatoes 70% Google User 86 % ရထားသော ဒါရိုက်တာ Peter Berg ရိုက်ကူးထား၍ : R.J. Stewart က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Dwayne Johnson, Seann William Scott, Christopher Walken တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Comedy ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. စားမိုမှူးအဖြစ်အယောက်ဆောင်ထားသောသူတစ်ယောက်သည် အမေဇုံမှ လူဆိုးဂိုဏ်းတစ်ခုမှာ သားကို အိမ်ပြန်ပို့ရန် ငှားရမ်းခံရလေသည် သို့သော် ဖိနှပ်ခံရတဲ့ မြို့တစ်မြို့ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှု နဲ့ ဒဏ္ဍာရီလာ ရတနာတစ်ခုကို ရှာဖွေမှုကိုပါ ပါဝင်ပတ်သက်လိုက်ရတဲ့အခါ ဘယ်လိုအက်ရှင်စွန်စားခန်းတွေ တွေ့ရမလဲ ...
G.I. Joe: Retaliation (2013) မြန်​မာစာတန်းထိုး
G.I. Joe: Retaliation (2013) မြန်​မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 5.8/10 Google User : 83% Genre: Action, Adventure, Sci-Fi Run Time:2hours3mins G.I. Joe: Retaliation (2013) သည် IMDb 5.8 Google User 83 % ဒါရိုက်တာ Jon M. Chu က ရိုက်ကူးထား၍ Rhett Reese, Paul Wernick တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးထားကာ သရုပ်ဆောင် Dwayne Johnson, Channing Tatum, Adrianne Palicki တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. The G.I. Joes ဆိုသည်မှာ သူတို့ရဲ့ ...
Moana (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Moana (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings:7.6/10 Rotten Tomatoes 96% Google User : 92% Genre: Animation, Adventure, Comedy Run Time: 1 hour 47 mins Moana (2016) သည် IMDb 7.6 Rotten Tomatoes 96% Google User 92% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Ron Clements, John Musker တို့က ရိုက်ကူးထား၍ Jared Bush , Ron Clements တို့က ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ အသံသရုပ်ဆောင် Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Rachel House တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Animation, Adventure, Comedy ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ.. ရှေးဟောင်း ပိုလီနီးရှားတွင် Demigod ...
The Fate of the Furious (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Fate of the Furious (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 6.8/10 Rotten Tomatoes : 66% Genre: Action, Adventure, Crime Run Time :2hours 16 minutes The Fate of the Furious (2017) ဇာတ်ကားသည် IMDb 6.8 Rotten Tomatoes 66% google user 88% ရထားသော ဒါရိုက်တာ F. Gary Gray ရိုက်ကူး၍ Chris Morgan, Gary Scott Thompson က ဖန်တီးရေးသားထားကာ သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ သိတဲ့အတိုင်း ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီးတွေ Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson တို့အပီအပြင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, ...